Maamulka Gobolka Sh/Hoose oo ka hadlay dadkii ku dhintay Qaraxii deegaanka lafoole - Awdinle Online
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa si kulul waxaa uu kaga hadlay qarixii dadka badan ay ku dhinteen oo Maanta ka dhacay agagaarka Isbitaalka Xaawa Cabdi ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Najax ayaa u tacsiyadeeyay dadkii ku geeriyooday qaraxaas, isaga oo ku eedeeyay inay ka dambeeyaan Ururka Al-Shabaab oo dhowr jeer wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye qaraxyo ku weeraray Ciidamo dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
“Allaha u naxariisto shacabkii maanta argagixisada Shabaab ay ku xasuuqeen Ceelasha biyaha ka dib miino ay ku qarxiyeen gaari ay saarnaayeeen, tani waxay cadeyneesaa in Shabaab ay u taagan yihiin xasuuqa shacabka ayuu yiri” Guddoomiye Najax.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Hey’adaha amaanka ka howlagala Afgooye ilaa Ceelasha ay sugaan amniga dadka ku safraya wadadaas,hayeeshee mararka qaar ay weeraro ay ku waxyeeloobaan Shacab ay ka dhacaan.
Qarixii ka dhacay deegaanka lafoole ee duleedka Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 10 Ruux oo saarnaa Gaari nooca Soomaalida u taqaano Hoomey,kaas oo ka ambabaxay Magaalada Muqdisho kuna sii jeeday degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleHowlgal lagu laayey Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Next articleLabo bil kadib xernaan shihii Masjidka Nabiga oo dib loo furay